QA/QC Staff | Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co.,Ltd ﻿
11.6.2020, Full time , Manufacturing
ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင်လည်း Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co., Ltd. အမည်ဖြင်မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုန်တွင် စက်ရုံကို စတင် လည်ပတ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့စက်ရုံဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်းဖြင့် နောင်အနာဂတ်တွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် မိဘပြည်သူများထံသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။Rohto-Mentholatum Co., Ltd. ကို Japan နိုင်ငံ Osaka မြို့တွင် ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၌ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နံပါတ်(၂)ဆေးနှင့်အလှကုန် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ်(၁) OTC မျက်စဉ်းဆေးနှင့် အခြားသောဆေးနှင့် ဆေးအလှကုန် ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ လျှက်ရှိပါသည်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၁၅၀)ကျော်တွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ "V-Rohto" မျက်စဉ်းဆေးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ မှ စတင်ပြီး “ACNES” ၊ “OXY” ၊ “Sunplay” ၊ “LipIce” ၊ “Happy Event” ၊ “Lip On Lip” ၊ “Selsun” ၊ “Remos IB & IR” ၊ “Scar-Z” စသည့် Products များကို ယနေ့ထိတိုင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
•	Available to create & service the specification of products.
•	.In-process control during manufacturing process.
•	Check and analyze the product samples to evaluate quality.
•	Communicate quality related information to relevant organization.
•	Have to report to Head of Department.
•	Participate in development of product specification.
•	B.Sc (Chemistry) or (I.C)
•	Knowledge to Quality Control.
•	Knowledge to Good Manufacturing Process.
•	Basic Computer Skill (Microsoft Office) and Basic English Skill.
•	Communication and Coordination Skill.
•	Age: From 23 years to 30 years.
Work location Room (1110), 11th floor, Yuzaba Tower, Shwegonedine Road, Bahan Township,Yangon, Myanmar
QA/QC Staff Chemical Engineering Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Rohto-Mentholatum(Myanmar)Co.,Ltd Chemical Engineering Jobs Chemical Engineering Jobs Manufacturing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Naypyitaw City 85 Days
+Rest of the world 96 Days